But the new playstat - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: but the new playstation ' s out (英語 - ビルマ語)
But the industry’s been in decline.
သို့သော် ဤနယ်ပယ်မှာ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာနေသည်။
The new name is void.
ဘုရားသခင်၏ သာသနာတော်သည် တိုးပွားများပြားလာ၏။
The new name is equal to the old one.
File transfer completed, but the file was corrupted
ဖိုင် လှမ်းပို့ခြင်း ပြီးဆုံး
သင်တို့ဆံပင်သည်လည်း အကုန်အစင် ရေတွက်လျက်ရှိ၏။
ဖာရိရှဲတို့ကလည်း၊ နတ်ဆိုးအကြီးကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။
The new draft will be subject toareferendum process.
အဆိုပါ အသစ်မူကြမ်းသည် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု အပေါ်တွင် မူတည်နေမည်။
ဖြောင့်မတ်သော သူ၏အလင်းသည် ရွှင်လန်း ၏။ မတရားသော သူ၏မီးခွက်မူကား၊ သေရလိမ့်မည်။
ငွေရတတ်သောသူက။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု ကိုယ်ကို ထင်တတ်၏။ ဥာဏ်ကောင်းသော ဆင်းရဲသား မူကား၊ ထိုသူကို စစ်ကြောတတ်၏။
Partial lists of entry restrictions from IATA and The New York Times
IATA နှင့် The New York Times မှ ပြည်ဝင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်များ၏စာရင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
စစ်သူကြီးလုသိသည် စစ်သူရဲများနှင့်လာ၍ အကျွန်ုပ်တို့ လက်မှနှုတ်ပြီးလျှင်၊
ပညာသတိရှိသောသူတို့မူကား၊ မီးခွက်နှင့်တကွ ဘူး၌ပါသောဆီကိုလည်း ယူကြ၏။
အဓမ္မလူတို့မူကား၊ ပြည်တော်မှပယ်ရှင်းခြင်း၊ လွန်ကျူးသော သူတို့သည် နှုတ်ပစ်ခြင်းကို ခံရကြလိမ့် မည်။
μνημονευθη (ギリシア語>ブルガリア語)250 words essay on terrorism in india (英語>ベンガル語)ब्लू पिक्चर वीडियb (ヒンズー語>英語)kasalungat ng nasaktan (タガログ語>英語)브란데부르크 (韓国語>英語)adreso (エスペラント語>スペイン語)ang galing mo (タガログ語>英語)बीपी फिल्म सेक्स (ヒンズー語>英語)dpp (英語>ドイツ語)how much time it will take (英語>ヒンズー語)tum mere sath khana khao gi (ヒンズー語>英語)exploitatie (オランダ語>スペイン語)eu tueela sai fogo (ポルトガル語>スペイン語)adhesion (英語>ギリシア語)apply update from cache (英語>イタリア語)ridho febrian (インドネシア語>アラビア語)picha za kutombana ulaya tomba (フランス語>英語)uitspreek (アフリカーンス語>トルコ語)toujous les depeches (フランス語>英語)praznik (セルビア語>ギリシア語)lajavci (セルビア語>ルーマニア語)walang kasing saya (タガログ語>英語)youtube merchandise (ルーマニア語>英語)annyeong jal jinaess eoyo? (韓国語>英語)me llamas (スペイン語>英語)